Louis Van Gaal Oo Shaaciyey MAGACYADA 10kii Ciyaartoy Ee Uu Doonayay In Manchester United Uu Keeno - Gool24.Net
Louis Van Gaal Oo Shaaciyey MAGACYADA 10kii Ciyaartoy Ee Uu Doonayay In Manchester United Uu Keeno
Tababarihii hore ee Manchester United ee Louis van Gaal ayaa shaaciyey magacyada toban xiddig oo uu doonayay inuu keeno Old Trafford sannadkii 2014.
Van Gaal ayaa Manchester United loo magacaabay sannadkii 2014 isaga oo beddelay David Moyes, laakiin tababarahan oo xulka qaranka Netherlands kaalinta saddexaad geeyey koobkii adduunka ee sannadkaas ayaa isaguna waayey xiddigihii uu doonayay inuu lasoo saxeexdo si uu kooxda ugu soo celiyo heerkeedii.
Waraysi uu siiyey Majaladda FourFourTwo ayaa uu Van Gaal ku shaaciyey magacyada ciyaartoydii uu doonayay inuu keeno Old Trafford, waxaanu yidhi: “Waxaan doonayay Robert Lewandowski laakiin markii ay caddaatay in tani adag tahay waxaan isku dayay inaan helo Gonzalo Higuain.”
Van Gaal waxa uu caddeeyey in ka hor intii aanu shaqada kooxda qabanin, inuu maamulka sare kala hadlay ciyaartooyo uu ku jiro Neymar, waxaanu yidhi: “Ka hor intii aanan imanin, waxa sidoo kale aan boodhka kooxda kala hadlay Neymar. Haddii aad tahay United, waa inaad xiddigaha waaweyn ku fikirto. Isaga naf ahaantiisu wuu xiisaynayay kooxdan marka laga eego iibinta shaadhka (xayaysiiska), aniguna waxaan doonayey guuleyste degdeg ah. Sababtaas darteed, waxaan isku dayay inaan helo Sadio Mane iyo Riyad Mahrez. Thomas Muller ayaa isaguna ku jiray liiska ciyaartoyda aan doonayay, khadka dhexena waxaan u rabay N’Golo Kante.”
Tababare Van Gaal oo muddo kooban kaddib isagana la eryey, waxa kale oo uu magacaabay saddex ciyaartoy oo kale oo difaaca iyo khadka dhexe ah oo uu doonayey, waxaanu yidhi: “Waxa kale oo aan isku dayay inaan lasoo saxeexdo James Milner oo boosas badan loo isticmaali karayay, isla markaana leh xirfad hoggaamiye. Difaaca, waxaan doonayay Sergio Ramos iyo Mats Hummels, sababtoo ah, kuwayagu may ahayn difaac adag.
“Kuwaas ayaa ahaa bartilmaameedkayga, laakiin midkoodna maan helin. Ma garanayo sababta, maxaa yeelay, anigu tababare ahaan kumaan lug lahayn wada-xaajoodyada lala galayay ciyaartoydan.
“Kaddib markii aan anigu tegay, ciyaartoyda sida Riyad Mahrez iyo N’Golo Kante waxay tageen Manchester United iyo Chelsea, halka Man United aanay midkoodna helin. Waan dhibsaday taasna.”